सेवा - शेन्डोंग Gaoqiang नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
१. कृपया बिक्री मानिससँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हामी तपाईलाई राम्रो सहयोग गर्न सक्छौं:
व्हाट्सएप: +86 18 १3535359999787870०
२. पूर्व बिक्री सेवा
कृपया हामीलाई भन्नुहोस् उत्पादन किन्न। बिक्री मानिस तपाईंलाई कागजात तस्वीर वा भिडियो द्वारा परीक्षण रिपोर्ट दिन्छ। केहि परिक्षण डेटा चीनबाट, कोही विदेशबाट।
हामीले मेरो ग्राहकहरूबाट केही डाटा स collected्कलन गरेका छौं। यदि तपाईं धेरै नजिक हुनुहुन्छ भने डाटा धेरै उच्च मूल्य हुन्छ।
तपाईंले अर्डर सेट गरेपछि, बिक्री मानिस तपाईंलाई उत्पादन तालिका देखाउँदछ र परीक्षण परिणाम जाँच गर्दछ। र एउटा नमूना रिजर्व गर्नुहोस्। नमूना मिति, उत्पाद नाम, देशको साथ नोट गरियो। यो राम्रो हुनेछ एक बर्षको लागि आरक्षित।
After. बिक्री पछि सेवा
१) यी कारणहरू रासायनिक सामग्री हुन्, कहिलेकाँही हामी समस्या अनलाइन समाधान गर्न सक्दैनौं। हामी तपाईंको ब्याच प्लान्टमा उड्न सक्छौं र तपाईंको टेक्निशियनसँग कुराकानी गर्न सक्छौं। हामीसँग क concrete्क्रीट मिश्रण र ब्याच प्लान्टमा प्रशस्त अनुभवहरू छन्। र हामी तपाईंलाई व्यापारमा उच्च दक्षता मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्दछौं।
२) यात्रा लागत: हामी लागत सहन गर्छौं
)) हामीसँग दीर्घकालीन ग्राहकहरू र वित्तीय पुरस्कारहरूको भ्रमण योजना छ नीति वार्षिक रूपमा।
संगठित गर्नुहोस्: हामी व्यक्तिहरूको समूह हो। हामी समान लक्ष्यहरूको लागि सँगै काम गर्दछौं।
सेयर गर्नुहोस्: सबैजनासँग विशेष सीप हुन्छ। तिनीहरूलाई तिनीहरूको आफ्नै भूमिका प्रदर्शन गर्न दिनुहोस्।
सिक्नुहोस्: हामी सिक्न इच्छुक छौं ताकि हामीसंग उचित क्षमता छ।
खोज्नुहोस्: हामीसँग सामेल हुन प्रतिभा खोज्न हामी इच्छुक छौं।
कुराकानी: हामी कर्मचारीहरु बीच बहस प्रोत्साहित गर्छौं। समस्या सुल्झाउन र टीमको सेवा क्षमता सुधार गर्नका लागि अनुकूल सुझावहरू लिइनेछ।
हेरचाह: जब हामी कामदारहरूले समस्याहरू भेट्टायौं समर्थन गर्दछौं।
शेन्डोंग Gaoqiang नयाँ सामग्री टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड एक an १ 00 ०० वर्ग मिटर निर्माण क्षेत्र को लागी र वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रयोगशाला को लागी 600०० वर्ग मीटर छ।
हाम्रो कम्पनीले एक पूर्ण कंक्रीट मिश्रण उत्पादन लाइन, रासायनिक विश्लेषण र बिल्डिंग विश्वविद्यालयको बिल्डिंग र सिभिल इन्जिनियरि Beijingको बेइजि University विश्वविद्यालयको साथ भौतिक सम्पत्ति प्रयोगशाला, ठूलो मापन उपकरण र उपकरण मापन र परीक्षणको लागि आधुनिक उपकरणहरूले सुसज्जित छ। हाम्रो कम्पनीसँग एक कडा अनुसन्धान र विकास समूह छ जुन पेशेवर डाक्टरहरू, बिल्डिंग साइन्स अफ चाइना एकेडेमीका स्नातकहरू समावेश गर्दछ।
प्रयोगशालाले तथ्या and्क र नयाँ उत्पादहरूको सम्भाव्यता र प्रभावकारितालाई १ वर्षको लागि सूचीमा प्रयोगद्वारा परीक्षण गर्नेछ। तर सिमेन्ट र बालुवाको भिन्नताका कारण उपयोग अघि कंक्रीट परीक्षण गर्नुपर्नेछ। हाम्रो बिक्री पनी सेवाका अनुसार हामी आवश्यक परेमा on_site टेक्निकल समर्थन दिनेछौं।
कंक्रीट मिलावट: नि: शुल्क
समय: नमूना पठाइनेछ २ दिनमा हामीले एक्सप्रेस लागत प्राप्त गरेपछि
प्याक: सेतो HDPE बोतल
एक्सप्रेस: ​​DHL वा FEDEX
एक्सप्रेस लागत: खरीददार द्वारा
नीति: जब खरीदारले हाम्रो सामग्री बुक गर्दछ, तब व्यक्तिको भाव लागतलाई मूल्यको अंशको रूपमा गणना गरिनेछ।
१. मेरो कारखानामा स्वागत छ
यदि तपाईंसँग मेरो उत्पादनहरूमा रुचि छ भने कृपया चीन आउनुहोस् र मेरो कम्पनीको भ्रमण गर्नुहोस्। हामी तपाइँलाई उत्पादन प्रक्रिया देखाउँनेछौं र तपाइँले हेर्नु पर्ने परीक्षण गर्नुहोस्। कृपया तपाइँसँग केहि नमूनाहरू लिनुहोस् जब तपाईं फिर्ता आउँनुहुन्छ र आफ्नै सीमेन्ट र बालुवाको साथ परीक्षण गर्नुहुन्छ।
होटल: हामी तपाईंको लागि होटल बुक गर्दछौं।
यात्रा लागत:यात्रा लागत सामानको एक हिस्साको रूपमा गणना हुनेछ जब तपाईं हाम्रो सामग्री बुक गर्नुहुन्छ। हामीसँग मेरा उत्पादनहरूमा विश्वास छ किनकि हामी उनीहरूसँग धेरैसँग तुलना गर्छौं।
२. हामी तपाईंको कम्पनीको भ्रमण गर्नेछौं
यसको कारण रासायनिक सामग्री हो, कहिलेकाँही हामी समस्या अनलाइन समाधान गर्न सक्दैनौं। हामी तपाईंको ब्याच प्लान्टमा उड्न सक्छौं र तपाईंको टेक्निशियनसँग कुराकानी गर्न सक्छौं। हामीसँग क concrete्क्रीट मिश्रण र ब्याच प्लान्टमा प्रशस्त अनुभवहरू छन्। र हामी तपाईंलाई व्यापारमा उच्च दक्षता मार्ग पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्दछौं।
यात्रा लागत: जब हामी हाम्रो सामग्री बुक गर्छौं हामी खर्च गर्छौं।
W. हामीसँग लामो अवधिको ग्राहकहरु र वित्तीय पुरस्कार नीति वार्षिक यात्रा योजना छ।
१.liquid प्रकार polycarboxylate सुपरप्लास्टिकिज़र
१) आईबीसी ट्या tank्क १००० किलोग्रामदेखि १२०० किलोग्राम प्रत्येक, १ × २० 'कन्टेनरले २० पीसी IBS ट्या tank्क लिन सक्छ, लेबल अनुरोधको रूपमा हुन सक्छ
२) फ्लेक्सी ट्या tank्क: २०००० किलोग्रामदेखि २000००० किलोसम्म प्रत्येक, १ × २० 'कन्टेनरले १ पीसी फ्लेक्सी ट्याi्क लिन सक्दछ, लेबल अनुरोधको रूपमा हुन सक्छ
२ देखि days दिन पछि निक्षेप प्राप्त भयो
१. टीटी %०% जम्मा, र %०% ब्यालेन्स अफर BL को प्रतिलिपि देखी
२. अपरिवर्तनीय LC दृष्टिमा